We.com.mm - ပညာသားဆန်တဲ့ ဂိမ်းဆော့ခြင်း
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေကို စိတ်အပန်းပြေစေဖို့အတွက် အမျိုးစုံသောဂိမ်းတွေ ထွက်ရှိနေပါတယ်။ Online ကနေရော Offline ကနေပါ အလွယ်တကူ ဆော့လို့ရနေတဲ့အပြင် လူကြီးလူငယ်မရွေး ဆော့လို့ရတယ် ဆိုတော့ကား အပျင်းလည်း ပြေ၊ စိတ်အပန်းလည်း ပြေစေတာမို့ သဘောကျကြနေကြတာ မဆန်းပါဘူး။
ဂိမ်းကို အလွန်အကျွံဆော့တာက ကျန်းမာရေးအရ ထိခိုက်စေတယ်ဆိုပေမယ့် အလွန်အကျွံ မဟုတ်ရင်တော့ စိတ်အပန်းပြေစေသလို စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေကို ကင်းဝေးစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်တွေ့ဘဝမှာလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနဲ့ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေကို ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။ ကဲ ဂိမ်းဆော့ခြင်းကနေ ရနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင် . . .
၁။ မှတ်ဉာဏ်အား ကောင်းစေခြင်း
ဂိမ်းဆော့တာက ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတာမို့ မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုအားကောင်းစေပါတယ်။ သာမန်ထက် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိ မှတ်ဉာဏ်ကို တိုးမြင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဂိမ်းထဲက အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းရတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်လို့ သိရပါတယ်။
၂။ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း မြန်လာခြင်း
ဂိမ်းဆော့နေတဲ့အချိန်မှာ မျက်လုံးက တီဗွီ (သို့) ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ကြည့်နေပေမယ့် ဂိမ်းထဲက လျှပ်တပြက်အခြေအနေတွေကို ဦးနှောက်က တွက်ချက်ပြီး လက်ကို အကွက်ကျကျ ရွေ့လျားခိုင်းစေနေပါတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်မြန်ချရမယ့် အခြေအနေတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုမြင့်တက်လာစေပါတယ်။
၃။ အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း မြင့်မားလာခြင်း
စိတ်ကို အပြည့်အဝနှစ်ပြီး ကစားနေတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း တိုးတက်လာသလို ဂိမ်းအဆင့်တွေ အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ စဉ်းစားရတာတွေက ဆက်စပ်တွေးခေါ် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုလည်း ပိုမိုကောင်းလာစေပါတယ်။
၄။ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း
အပြင်လောကမှာ ဘယ်လိုပြသာနာတွေ ကြုံနေပါစေ ဂိမ်းထဲကို အာရုံရောက်သွားရင်တော့ ခဏတာ အားလုံးကို မေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်ကြောင့် နေ့စဉ်ဘဝမှာ ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို ကုစားနိုင်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေအပြင် စိတ်လေနေတဲ့အခါမှာ ဂိမ်းဆော့တာက မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေ မလုပ်မိစေသလို အားအင်သစ်တွေ ပြန်လည်မွေးဖွားလာစေတာေြ ကျွန်တော်တို့တွေအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကဲ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိအောင် အတိုင်းအတာအတွင်း ဆော့ကြဖို့ အကြံပြုရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါရစေ . . .
သင်္ကြန်မှာ ကားနဲ့လည်လည်ထွက်တဲ့အခါ ဒီအချက်လေးတွေ သတိပြုပါ
အလုပ်ပိတ်ရက်တွေမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လိုက်နာသင့်တဲ့အရာများ